China FIDO Jars orinasa sy mpamatsy | Tsara ery
Ho an'ny fahasalamana, ho an'ny mpiady, ho an'ny mpankafy sakafo, ho an'ny malemy. Na inona na inona fantatrao dia voafehin'ny io siny io mba hahafenoana ny filanao. Namboarina tany Italia ny fitaratra tsara indrindra, ary fisokafana malalaka ho an'ny fidirana mora sy ny sarety fiaramanidina.
Mahaiza mifantina. Manana ny antony. Ny tombo-kase an'habakabaka amin'ny siny dia mitahiry ny fahatsapana ho fahatsorana sy ny tsiron'ny sakafooinao, ary koa ny fisorohana ny fitrangan'izany. Fahano amin'ny ankohonanao ny tsara indrindra sy tsara indrindra.
2. Tena mazava azo jerena
Ny mahafantatra dia ny fifehezana. Ny siny dia vita amin'ny fitaratra mazava tsara tarehy, asongadinao aminao ny fomba fijerin'ny zavatra ao anatiny. Tafiditra ao ny takelaka misy marika momba ny fametrahana marika sy ny famantarana.
3. Fidirana mora
Fifaliana ao anaty siny, tsy misy tolona idirana. Ny fanokafana malalaka dia ahafahanao miditra ao anatiny mba hidirana mora sy averina. Nisokatra ny tadivavarana fanakodia ary mihidy raha tsy voatery hiady aminy ianao.
4. Mifanaraka daholo
Mavesatra sy be dia be ao anaty siny iray. Aza mikitikitika, aza mifandefitra, aza mieritreritra indroa. Ny tavoahangy dia ampy hametahana be dia be amin'ny fahafaham-po amin'ny filanao.
Previous: Saribao fitotoana fitaratra miaraka amin'ny lakana roa-roa
Manaraka: Jarina fitahirizana vera miaraka amin'ny Cork
Toro-sisiny mioritra mahitsy miaraka amin'ny Cork Stopper (D30)
Tube Viles miaraka amin'ny vy vita amin'ny metaly ambony indrindra Screw Ca ...
Tariby misotro labiera